प्रदेश–२ : अवसर र चुनौती | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट प्रदेश–२ : अवसर र चुनौती
प्रडक्ट 98 views
काठमाडौं । देशमा तीन तहको सरकार बनिसकेपछि आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि धेरै बहस हुन थालेका छन् । यसका लागि ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकासकै लागि काम गर्ने बताएका छन् । सङ्घीयता लागू भएर देशमा राजनीतिक स्थिरतातर्फ गइरहेका बेलामा आर्थिक अभियान दैनिकले प्रदेश नम्बर २ का उद्योगी व्यवसायीसँग ‘सङ्घीयतामा व्यवसायका अवसर र चुनौती’ विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ । सोही कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगीहरूले औद्योगिक विकासका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अभियानले बिहीवार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममका क्रममा उनीहरूले राखेका विचार र सरकारलाई दिएका सुझावहरू यहाँ समेटिएको छ :
वीरगञ्ज राज्यबाट सधैं उपेक्षित छ
सांसद, २ नम्बर प्रदेश
अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग
देश अहिले सङ्घीय संरचनामा गएको छ । तर, अहिलेसम्म राज्यको व्यवहार त्यो दिशामा केन्द्रित भएजस्तो लाग्दैन । देशमा उद्योग र उद्योगी व्यवसायी चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् भन्नेमा राज्य नै स्पष्ट छैन । राज्यको व्यवहारले देशमा उद्योगी व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा अझै शङ्का छ । किनकि, नेपालको व्यापारघाटा अहिले ८ सय प्रतिशत हुँदा पनि राज्य त्यसमा चिन्तित छैन । यति ठूलो व्यापारघाटा हुँदा पनि यसलाई कसरी कम गर्ने, यसका लागि केके काम गर्नुपर्ने हो, नेपाली उद्योगलाई केकस्ता सुविधा दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा राज्यलाई कुनै मतलब छैन । राज्यलाई यदि कुनै कुराको चिन्ता छ त केवल राजस्व कसरी उठाउने र लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्ने मात्रै छ । राजस्वबाट कति आम्दानी भयो र खर्च गर्नुपर्ने बजेट कति छ ? त्यो बजेटबाट खर्च चल्छ चल्दैन, त्यति मात्रै चिन्ता गर्ने कि दीर्घकालीन स्रोत राख्ने ? यति ठूलो व्यापारघाटा हुँदा दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे राज्य चिन्तित भएको खै ?
अर्को कुरा, देशमा बजेट विनियोजन हुँदा अधिकांश बजेट राजनीतिबाट प्रेरित भएर वितरण हुन्छ, न कि विकासको आवश्यकताको आधारमा । अब क्षेत्रगत कुरा नै गरौं, मुलुकको ६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन तथा ७० प्रतिशत कार्गो ढुवानी हुने ठाउँ वीरगञ्ज तर, विकासका लागि हामीलाई उपेक्षा गरियो, ६ लेनको बाटोमा कुनै सुनुवाइ भएन । अब सोच बदल्न जरुरी छ । बाटोकै कारण प्रतिवर्ष ३ अर्बभन्दा बढी रकम पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा नोक्सान भएको छ । हामीले विगत १६ वर्षदेखि यस विषयमा कुरा उठायौं । भारतले पाइपलाइन नबनाए पनि हामी आफैं बनाऔं । तर, कसैले सुनेनन् । मलाई लाग्छ २०४६ सालपछि पनि मुलुक हरेक ढङ्गले प्रयोगशाला नै भइरहेको छ ।
हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, देशभर नै लोडशेडिङ छैन । तर, वीरगञ्जमा औद्योगिक कोरिडोरमा अझै पनि लोडशेडिङ छ, त्यो पनि ८ घण्टाको । तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीकै उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा लोडशेडिङ नगर्ने भन्नुभयो तर, भनेकै अर्को दिन दैनिक ४ घण्टा मात्र भएको लोडशेडिङ ८ घण्टा गराइयो । यहाँनेर विभेद गरियो । सरकारले सेजको कुरा गरेर उद्योगीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ । सेजका लागि २/३ हजार बिगाहा क्षेत्रफलको जमीन चाहिन्छ । तर, यहाँ सरकार सय २ सय बिगाहा जग्गामा सेज बनाउने भनेर भनिरहेको छ ।
निजगढमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा हामीले पटकपटक गर्‍यौं । सुनुवाइ जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएन अनि हामीले भन्नै छोड्यौं । काठमाडौंलाई आवश्यक छ भने बनाउनुस् छैन भने नबनाउनुस् । दु्रतमार्ग प्राथमिकतामा किन परेन । अर्को कुरा हामीले रेलमार्ग निर्माणका बेला बर्दिबासबाट शुरू नगरी रक्सौल–अमलेखगञ्ज–पथलैया–बर्दिबास गरौं भनेको नेताहरूले मानेनन् । समग्रमा हाम्रो देशको विकास गर्ने भनेकै जलविद्युत् र पर्यटनबाट हो । त्यसैले पहिले ती क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट खर्च गरौं । एक क्षेत्रमा काम भएपछि त्यसले अरू क्षेत्रका लागि प्रतिफल दिन थाल्छ । अनि अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ, अवसरलाई पहिचान गर्न सके चुनौती आफैं कम हुँदै जान्छन् ।
हामीसँग अवसर नै अवसर छन्
तीन तहको सरकार छ । केन्द्र सरकार लोकतान्त्रिक भनिए पनि तानाशाही प्रवृत्ति, पूर्वाग्रही सोच, हाम्रोभन्दा पनि मेरो क्षेत्र भनेर विकास गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा पनि यसको असर परेको छ । सङ्घीयतामा गएपछि राजधानी तोक्ने, नाम तोक्नेजस्ता विषयमा विवाद बाँकी नै छन् । राज्यले आपसमा जुधाउने काम गर्नु भएन । जनकपुरलाई धार्मिक र वीरगञ्जलाई आर्थिक वा राजनीतिक रूपमा राजधानी बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने हो ।
हामीसँग अवसर नै अवसर छन् । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । उर्वर भूमि पनि छ । हामीलाई मूल्ययुक्त वस्तु, अन्नको उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । दुई नम्बर प्रदेशमा सकिन्छ भने कृषि उत्पादनका लागि कृषि अनुसन्धान गर्ने संस्था वा विश्वविद्यालयको खाँचो छ । अहिले नेपालमा भारतीय बीउ बिजन ल्याउन दिइएको छैन । हाम्रा स्थानीय जातहरू लोप भइरहेका छन् । यसमा सरकारले अध्ययन गर्न सकेको छैन र उत्पादन हुने बीउ बिजन ल्याउन सकिएको छैन । हामीसँग दक्ष कामदारको अभाव छ । हामी विश्वलाई कामदार दिइरहेका छौं । तर, सबै अदक्ष कामदार छन् । दक्ष कामदार भएमा हाम्रो जीवनस्तर दोब्बर बन्थ्यो । यसका लागि हाम्रो क्षेत्रमा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटको आवश्यकता देखिएको छ । यसमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । विकासका मामलामा सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिनुपर्दछ । विकासको काम निजी क्षेत्र र जनताले गर्छन् । यसमा सरकारले सडक, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी लगानी गरिदिनुपर्दछ । भोटको राजनीतिका लागि कनिका छरेजस्तो बजेट बाँडिएको छ । यसले विकास ल्याउन सक्दैन ।
हामीले धेरै गुनासो गरेका छौं । निजीक्षेत्रले गुनासो मात्र गरेर बस्ने अवस्था पनि छैन । यहाँका नेताले विश्वासको वातावरणमा कानून बनाएर ठोस उपलब्धि निकाल्नु पर्दछ । आफ्नो क्षेत्रका नेताहरूलाई गाली गर्ने ठाउँमा गाली गरौं र माया गर्ने ठाउँमा माया गरौं । उनीहरूलाई साथै लिएर हाम्रा कुरा उनीहरूबाट सम्बोधन गराउने काम गर्नुपर्दछ । हामीले नीति निर्माणको तहमा रहेका नेतादेखि अरूलाई नजीकका औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण गराएर त्यहाँको अनुभवबाट यहाँ पनि औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्न लगाउनु पर्दछ ।
अब प्रदेशको बजेट आउँदै छ । स्थानीय सरकार र प्रदेशले कति बजेटले कसरी विकास गर्छन् हेर्ने बेला आएको छ । तर, सरकारले उठाउने मुख्य कर केन्द्रमा सीमित छ । यो अधिकार प्रदेशलाई पनि उठाउन दिनु पर्छ । २ नम्बरमा प्राकृतिक स्रोत छैन । कसरी अगाडि बढ्ने समस्या छ, विकल्प खोज्नु छ । सेज भनेर सरकारले एउटै ठाउँको पाँचपटक उद्घाटन गरिसक्यो । तर, काम केही पनि हुँदैन । अब यहीँकै नेता छन्, हामीले आफ्ना समस्या र समाधानका उपाय बताएर विकास गराउनुपर्दछ ।
पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा कसरी उद्योग धन्दा गर्ने ?
अध्यक्ष, प्रदेश नम्बर २
सङ्घीयता के हो भन्नेबारे सरकारका मुख्य प्रतिनिधि नै अन्योलमा छन् । राज्यले सङ्घीयताको नाममा जनतालाई बेवकुफ बनाएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिए तापनि अहिले संविधानको प्रत्येक बुँदा एकअर्कामा बाँझिएको छ । राजनीतिक वृत्तबाट नै सङ्घीयता असफलजस्तो सुनिएको छ ।
राज्यले कस्तो खालको सङ्घीयता ल्याएको हो ? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु । वास्तवमा प्रदेश २ ले राज्यबाट व्यावसायिक अवसर कहिले पाएन । उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार राज्यले दिने क व्यवसायीले ? उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई सडक, विद्युत्, नीति निर्माण, आर्थिक सुरक्षालगायत आवश्यक पूर्वाधार दिनु राज्यको दायित्व हो, तर यी सबै दायित्वबाट राज्य पञ्छिएको छ । पूर्वाधार शून्य भएको ठाउँमा कसरी उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् ? प्रदेश २ लाई राज्यले पक्षपात गरेको छ । भएको लगानी राज्यको उपेक्षाले गर्दा बाहिरिएको छ । देशलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने जचुकालि, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानालगायत उद्योगधन्दा २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक मुलुकपछि नेताहरूको निजी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारका कारण सङ्कटमा परे । यद्यपि, प्रदेश २ मा कृषि, पर्यटन, सामाजिक सेवालगायतमा व्यावसायिक अवसर छन् । हामी कृषिमा धनी छौं, राज्यले यसलाई व्यावसायीकरण, आद्योगीकरण, बजारीकरण र अत्याधुनीकरण गर्न अवसर तथा प्रोत्साहन दिनुपर्छ । २ नम्बर प्रदेश बहुधार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । यसलाई बजारीकरण गर्न सके पर्यटकबाट लाभ लिन सकिन्छ ।
वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतको वीरगञ्जमा आगामी दिन आर्थिक विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना छ । मुख्यगरी यस क्षेत्रमा बन्द अवस्थामा रहेका थुप्रै उद्योग एवम् कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यसो भएमा आगामी दिन रोजगारीको ठूलो अवसर सृजना हुन सक्छ । बन्द अवस्थाका वीरगञ्ज चिनी मिल, कृषि औजार कारखानाजस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउँदा वीरगञ्जलगायत वरिपरिका थुप्रै व्यक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । यसले मुलुकबाट युवा पलायन रोक्न टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा घोषणा गर्नु आवश्यक छ । विगत २० वर्षदेखि यस सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न बारम्बार पहल गरे पनि सरकारले भने यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा हुँदा त्यहाँ सरकारबाट बजेट विनियोजन भई अन्य थुप्रै सेवा सुविधा प्राप्त हुन सक्छ । यसले गर्दा आगामी दिन व्यवसाय गर्ने अवसर सृजना हुनेछ । यस सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेसँगै त्यहाँ थप उद्योग स्थापनाका लागि बाटो खुल्छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका थुप्रै उद्योग व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढङ्गले सञ्चालन गर्न पनि यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । अतः यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
समग्र वीरगञ्जको विकासका लागि सरकारले सडक विस्तारको नाममा संरचना भत्काउने तयारी गरिरहेको छ । यो एक ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि यस विषयमा पुनः एकपटक छलफल बढाउनुपर्नेमा कुनै छलफलविना काम थालनी भएको देखिएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय धराशयी बन्ने देखिएको छ, जुन एक गम्भीर चुनौतीको रूपमा छ । वीरगञ्जको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, दर्ता भएकाभन्दा नभएका व्यवसायीले स्वतन्त्र एवम् सुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइन्छ । दर्ता भई निरन्तर कर तिर्दै आएको उद्योगमा कुनै पनि समय अव्यवस्थित एवम् धम्कीपूर्ण तरीकाले छापा मार्ने कार्य भइरहेको छ । यसले गर्दा व्यवसायी असुरक्षित महसूस गर्दै आएका छन् ।
सम्सीमा भन्सार नाका खोल्न जरुरी
गौशाला उद्योग वाणिज्य सङ्घ
२ नम्बर प्रदेशको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा भएको कमजोरीलाई उजागर गरी समाधान गर्न उक्त प्रदेशका प्रमुखले जोड दिने आशा गरेको छु । महोत्तरीको गौशालामा २ सय बिगाहा सरकारी ऐलानी जग्गा छ । उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले जथाभावी रूपमा कब्जा गरेर खेती गर्ने गरेका छन् । यसरी उक्त जग्गाको दुरुपयोग भइरहँदा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । यसबारे हामीले महासङ्घमा पनि कुरा राख्यौं । तर, यसबारे केही अगाडि बढ्न सकेको छैन । गौशालामा भएको २ सय बिगाहा जग्गामा सरकारले कुनै किसिमको उद्योगलाई जिम्मा दिनुपथ्र्यो । उक्त क्षेत्रमा उद्योगलाई जिम्मा दिएको भए निम्न वर्गले पनि रोजगारी पाउँथे । यसले केही हदसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम रोक्ने थियो । गौशाला भनेको धेरै पुरानो बजार हो । यो महोत्तरीकै ठूलो बजार हो । यहाँ अहिले भर्खरै राजमार्ग बन्न लागेको छ । गौशालाबाट करीब १२–१३ किलोमिटर पर सम्सी बोर्डर पर्छ । यो बोर्डरमा भन्सार नाका राख्न महासङ्घ र भारतीय राजदूतावासमा पटक पटक परिपत्र गर्‍यौं । अहिले जलेश्वरबाट घुमेर आउनुपर्दा गौशाला जान र हाइवे पुग्न धेरै टाढा पर्छ । त्यहाँ त भन्सार छ । तर, सम्सीमा भन्सार नाका राखेमा १२–१३ किलोमिटरको बीचमा गौशाला पर्छ र ९ किलोमिटरको बीचमा राजमार्ग पर्छ । यो धेरै नजीकको हुने भएकाले सरकारले सम्सीमा भन्सार नाका खोल्न पहल गर्नुपर्‍यो ।
सुरक्षा दिए पर्याप्त आर्थिक क्रियाकलाप
मिर्चैया उद्योग वाणिज्य सङ्घ
उद्योग व्यवसाय गर्नेका लागि सङ्घीयताले अवसरै अवसर ल्याएको छ । राजनीतिक परिवेश अस्थिरताबाट स्थिर हुने क्रममा छ । सरकारले उद्यमी÷व्यवसायीले गरेको लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत दिए २ नम्बर प्रदेशमा पर्याप्त आर्थिक क्रियाकलाप हुने मैले देखेको छु । मिर्चैया बजारबाट ३० किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय सिमाना पर्छ । उत्तरबाट विभिन्न सात जिल्लामा आवतजावत हुन्छ । त्यसैले, यो ठाउँ पर्याप्त सम्भावना भएको ठाउँ हो । मिर्चैयाको आर्थिक विकासका लागि पहिले त्यहाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुने वातावरण बन्नुपर्छ । हालसम्म त्यस्तो भएको छैन । लहानमा व्यवसायीमाथि गोली चलेपछि मिर्चैयाका व्यवसायी सन्त्रस्त छन् । यो सुरक्षासम्बन्धी जोखीमलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधि हुने गरेका भए पनि केन्द्र सरकारले भने हालसम्म सौतेनी व्यवहार गरेको अनुभूति हामीलाई भएको छ । सङ्घीय सरकारले यहाँ प्राथमिकताका साथ उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण बनाओस्, मिर्चैया छिट्टै समृद्ध बन्छ । सरकारले अनावश्यक बेला–कुबेला अनुगमन गर्ने, छापा मार्ने, व्यावसायिक फर्म शिल गर्ने, उद्योगमा ताला लगाउने गर्दा यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप थप सङ्कुचनमा परेको छ । अनुगमनकै कारण व्यापार÷व्यवसाय समस्यामा पर्नु भएन । विधिसङ्गत अनुगमन होस्, व्यवसायीले ऋण लिएर गरेको ठूलो लगानी अनुगमनकै कारण समस्यामा नपरोेस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।
सिराहा बजारमा जुन व्यापारिक रौनक थियो, त्यो अहिले छैन
सिराहा उद्योग वाणिज्य सङ्घ
सिराहाको आर्थिक विकासका लागि व्यापार व्यवसायसँगै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपर्छ । त्यहाँ पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धैरै ठाउँ छन् । तर, ती पर्यटकीय स्थललाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । तीमध्ये सलहेस मन्दिर पनि एक हो । यदि सरकारले त्यो मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने सिराहाले आर्थिक फड्को मार्न सक्छ । वैशाखकोे १ र २ गते उक्त सलहेसमा मेला लाग्छ । देश तथा विदेशका मानिस उक्त मेला हेर्न आउने गर्छन् ।
यस्तै, सिराहामा भएको मालिक दहदेखि अन्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि व्यावसायिक रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । आजभन्दा १२ वर्ष पहिला सिराहा बजारमा जुन व्यापारिक रौनक थियो, त्यो अहिले छैन । सिराहा बोर्डरनजीक भएको हुनाले आममानिस भारतीय बजारमा नै किनमेल गर्छन् । यसले गर्दा सिराहाको व्यापारिक विकासले गति लिन सकेको छैन । विवाह वा कुनै कार्यक्रमको भोजभतेरमा २० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो पैसा सबै बाहिर जान्छ । यदि त्योबराबरको रकम सिराहामा नै रहन पायो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अझै त्यो वातावरणको सृजना भएको छैन । यस्ता कार्यलाई सरकारी प्रशासनले पनि रोक्न आवश्यक छ । साथै, यस्ता समस्याबाट आउने अभावलाई परिपूर्ति गर्न पर्यटकीय क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ ।
बेरोजगारीले नेपाली युवा विदेशिनुपरेको छ, जसले गर्दा सिराहामा कामदारको अभाव भएको छ । भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको पैसा बाहिरिएको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उद्योग कलकारखाना स्थापनामा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । यसबाट स्वदेशमै पैसा कमाउन तथा बचाउन सकिन्छ र नेपाली युवाले पनि विदेशिनु पर्दैन ।
धार्मिक पर्यटनबाटै विकास
जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घ
सङ्घीयतासँगै व्यावसायिक अवसर र चुनौती दुवै विषय हामीमाझ छ । भर्खरै मात्र प्रदेश नम्बर २ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । लामो समयदेखि जलेश्वर–जनकपुर–ढल्केबरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने हामी उद्योगीको माग हो । यो विषय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उठ्नु सकारात्मक हो । अवसरका रूपमा सङ्घीयतालाई लिँदा प्रदेश नम्बर २ लाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिरलाई प्रमुख आधार बनाई प्रदेश नम्बर २ लाई धार्मिक संस्कृतिको हब बनाउन सकिन्छ, जसमा जलेश्वरमा रहेको जलेश्वर महादेवको मन्दिर, महोत्तरीमा रहेको पौराणिक लक्ष्मीनारायणको मठ र संस्कृत विद्यापीठलाई समेट्न जरुरी छ ।
हाम्रो संस्कृति हामीले प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा ओझेलमा परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र उद्योगी, सरोकारवालाबीचको समन्वयमा धार्मिक हब बनाउन सक्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ नमूना प्रदेश बन्ने निश्चित छ । जलेश्वर भारतीय सीमानजीक पर्ने ठाउँ हो । ‘बोर्डर टुरिजम’का रूपमा पनि महोत्तरीलाई विकास गर्न सकिन्छ । महोत्तरीमा गौशाला (गाई पाल्ने ठाउँ) छ भन्ने विषय चर्चामा रहन्छ । तर, राज्यले सही रूपमा लगानी र प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन । महोत्तरीमा सडक सञ्जालको समस्या बढी छ । सडक सञ्जालकै कारण उद्योगधन्दा खोल्न/खुलाउन कठिनाइ छ । उद्योगीहरू गाउँ–गाँउसम्म पुगेर उद्योग खोल्न तयार हुँदा हुँदै पनि उद्योगमैत्री वातावरण सृजना गर्न नसक्नु विडम्बना हो । व्यापारका लागि आवश्यक आधारभूत पक्षहरू, जस्तै– सडक, यातायात, विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सरकारले समयमै पुर्‍याउनुपर्छ ।